Eminye imidlalo Archives - Impempe
Category: Eminye imidlalo
Kwethulwe uhlelo lokugqugquzela iNetball KwaZulu-Natal
April 16, 2022 Impempe.com
Alfred Ngubane Umnyango wezemidlalo nobuciko nobungcebeleka KwaZulu Natal wethule uhlelo lokuthuthukisa ibhola lomnqakiswano olubizwa ngeFriday Netball World Cup. Lolu hlelo lwethulwe enkundleni yezemidlalo kwaMsane Sports Complex ngaseMtubatuba enyakatho yogu lwaKwaZulu-Natal. UNgqongqoshe womnyango, uHlengiwe Mavimbela ukhulume […]
Leave a commentAbasathuthuka, Eminye imidlalo, Ezakamuva
USerena uselalela umzimba ukuthi uthini ngaphambi kokuyodlala
March 22, 2022 March 22, 2022 Impempe.com
Alfred Ngubane USerena Williams ongumdlali wethenisi ovelele emhlabeni jikelele, usegcine ephefumulile ngokungadlali kwakhe kwi-Australian Open yakamuva. Uthi umzimba wakhe wawungavumi yingakho engabanga yinxenye yalo mqhudelwano. Ekhuluma nabeSportskeeda, uSerena uthe usazobuyela kulo mdlalo. Phela bese kukhona […]
Leave a commentEminye imidlalo, Ezakamuva
UBongiwe ufisa idlalwe nsukuzonke imidlalo yendabuko
September 30, 2021 Impempe.com
UDABA: Alfred Ngubane ISITHOMBE: Sithunyelwe UBongiwe Funeka waseMgungundlovu ugile izimanga emidlwalweni yesintu njengoba ephinde wazidlela amahlanga kumlabalaba. Ubesenqoba okwesithathu kulandelana ezingeni likazwelonke. Le ntokazi eneminyaka engu-18 ithi yajubula kakhulu ukunqoba lo mgqudelwano Ithi ayikaqedi ngoba […]
UMthethwa uthi abalandeli bazobuyela ezinkundleni, kodwa…
September 25, 2021 Impempe.com
UDABA: Alfred Ngubane ISITHOMBE: Twitter UNathi Mthethwa ongungqongqoshe wezemidlalo nokugcebeleka kuzwelonke uyivule ngokusemthethweni imidlalo yendabuko eMoses Mabhida Stadium ngoLwesihlanu. Le midlalo izobanjelwa ezindaweni ezehlukene ezakhele idolobha laseThekwini namaphethelo. UMthethwa ukhulume neMpempe wathi abalandeli bezemidlalo bangabuyela […]
IWoodburn Stadium nayo isizophendulwa inxanxathela yezitolo
September 19, 2021 Impempe.com
UDABA: Alfred Ngubane ISITHOMBE: Google Kunuka uhlofu phakathi kwePietermaritzburg Rugby Union nePietermaritzburg Sports Confedaration eholwa nguMhlengi Maxase. Abenhlangano yebhola lombhoxo ngaphansi koMgungundlovu kuvela ukuthi basezinhlelweni zokudayisa iWoodburn Rugby Stadium. Kuthiwa kunenkampani abaxoxa nayo efuna ukubhidlisa […]